janvier 2016 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady 24/01/2016 : Toriteny
« Ny Tenin’Andriamanitra manampy antsika hifanotrona toy ny fanirin’ny akondro»
Manao ahoana moa ny fomba fanirin’ny akondro? Rehefa maniry ka mitombo ny akondro dia misy zanany maniry manodidina azy, ka tsy azo alàna ireo zanany ireo fa manjary tsy mamoa ilay reniny. Rehefa mamoa tsara kosa ilay reniny dia azo afindra amin’izay ilay zanany manodidina azy. Izay ilay hoe “mifanotrona”. Ka toy izany ihany koa ny Tenin’Andriamanitra, io no antony mahatafavory antsika mianakavy.
Voalaza tao amin’ny Evanjely fa niditra tao amin’ny Sinagôga i Jesoa, tahaka ny fanaony amin’ny andro Sabata: natolotra azy ny Tenin’Izaia Mpaminany. Voalaza tao amin’ny Bokin’i Nehemia ihany koa fa io no fomba fanao. Izany hoe: tsy ampy ny fankalazantsika ny Litorjia raha tsy mahatratra ny fAnkalazana ny Tenin’Andriamanitra isika. Koa diso izany ny fiheveran’ny olona sasany hoe “ny fanolorana sy ny fankamasinana ihany no tena vonjena amin’ny Lamesa fa tsy maninona na tsy mahatratra ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra aza.” Manana lanja lehibe ao amin’ny Litorjia anefa ny Tenin’Andriamanitra. Mizara roa mazava tsara ny Litorjia amin’ny Lamesa: ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, ary ny fankalazana ny Eokaristia. Mitovy amin’io ihany koa ny fomba fanaon’ny Malagasy: alohan’ny hidirana amin’ny sakafo dia misy ny kabary isan-karazany (fiarahabana, fialan-tsiny, ventin-dresaka…) Izay ihany koa ny Litorjia amin’ny Lamesa: ny Tenin’Andriamanitra aloha vao miditra amin’ny Eokaristia, koa aoka ho tsaroantsika lalandava izany. Tahaka ny voalaza tao amin’ny Vakiteny voalohany: novakian’i Esdrasa ny Bokin’ny lalàna; izy no nanavao indray ny lalàna ary nanazava hoe ahoana ny hanatanterahana azy; ka liana ny vahoaka, ary nihaino azy nanomboka ny maraina mandra-pisasaky ny andro.
Continuer la lecture Alahady 24/01/2016 : Toriteny
Alahady 24/01/2016 : Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Nehemia (Neh. 8, 1-4a. 5-6. 8-10)
Novakiana ny bokin’ny lalàna ka azon’ny vahoaka tsara ny teny novakiana.
Tamin’izany andro izany, nony tonga ny volana fahafito, ka efa tafapetraka amin’ny tanànany avy ny zanak’i Israely, dia nivory toy ny olona iray ihany ny vahoaka rehetra, teo amin’ny kianja anoloan’ny Vavahadin’ny Rano. Ary efa nilazan’izy ireo i Esdrasa mpanora-dalàna, mba hitondra ny bokin’ny lalàn’i Môizy, izay nandidian’ny Tompo an’i Israely. Ka nentin’i Esdrasa mpisorona ny Lalàna, ho eo anatrehan’ny fiangonana, dia ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin’izay rehetra efa manan-tsaina hahafantatra azy; andro voalohan’ny volana fahafito tamin’izay. Novakîny teo anatrehan’ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin’izay efa manan-tsaina hahafantatra azy ny boky, teo amin’ny kianja anoloan’ny Vavahadin’ny Rano, hatramin’ny maraina ka mandra-pisasaky ny andro, ary nampandry sofina nihaino ny bokin’ny lalàna avokoa ny vahoaka.
Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany, no nitsangana i Esdrasa mpanora-dalàna ka nosokafany teo imason’ny vahoaka rehetra ny boky, fa tafasondrotra ambonin’ny vahoaka rehetra izy, ary rehefa nosokafany dia nitsangana ny vahoaka rehetra. Nisaotra ny Tompo Andriamanitra lehibe i Esdrasa, dia nanandra-tanana ny vahoaka rehetra namaly hoe: “Amen! Amen!” Sady niondrika sy niankohoka tamin’ny tany teo anatrehan’ny Tompo izy ireo. Novakîny mazava ny boky, dia ny Lalàn’Andriamanitra, novoasany koa ny heviny; ka azo tsara ny teny novakîna. Ary i Nehemia, governora, i Esdrasa mpisorona sy mpanora-dalàna, mbamin’ny Levita, nampianatra ny vahoaka, niteny tamin’ny vahoaka rehetra, nanao hoe: “Andro masina ho an’ny Tompo Andriamanitrareo ity, ka aza asiana fisaonana na ranomaso”. Fa nitomany avokoa ny vahoaka nony nandre ny tenin’ny Lalàna. Dia hoy koa i Nehemia tamin’ireo: “Mandehana mihinana hena matavy sy misotro zava-pisotro mamy, ary anatero anjara izay tsy nahavoatra, fa masina ity andro ity ho an’ny Tompontsika; ka aza malahelo fa ny fifaliana amin’ny Tompo no herinareo”.
Taratasy voalohan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1 Kôr 12, 12-30)
Vatan’i Kristy ianareo, ka samy rantsam-batany manaraka ny laharany tsirairay avy.
Ry kristianina havana, toy ny maha-iray ny vatana, na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha-vatana iray ny rantsam-batana, na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa Fanahy iray ihany no nanaovana Batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na Jody na Jentily, na mpanompo na tsy mpanompo ary Fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Koa ny vatana dia tsy rantsam-batana iray ihany, fa maro.
Raha ny tongotra hanao hoe: tsy isan’ny vatana aho, satria tsy tanana, dia izany ve no tsy haha-isan’ny vatana azy? Ary raha ny sofina hanao hoe: tsy isan’ny vatana aho, satria tsy maso, dia izany ve no tsy haha-isan’ny vatana azy? Raha maso avokoa ny vatana, inona indray no ho fandrenesana? Ary raha fandrenesana avokoa, inona indray no ho fanamboloana? Rantsam-batana maro anefa no efa nalahatr’Andriamanitra eo amin’ny vatana, araka izay itiavany azy avy. Ka raha rantsam-batana iray ihany izy rehetra, aiza ny vatana? Koa maro àry ny rantsam-batana, fa iray ihany ny vatana. Ny maso tsy mahazo manao amin’ny tanana hoe: tsy mila anao aho; ny loha tsy mahazo manao amin’ny tongotra hoe: tsy mila anareo aho. Fa ny rantsam-batana izay miseho ho malemilemy kokoa aza no vao mainka ilaintsika kokoa; ary ny rantsam-batana izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa aza no omentsika voninahitra bebe kokoa. Koa ny tsy misy hajany ao amintsika no hajaintsika kokoa; fa izay mendrika rahateo tsy mila izany. Satria tamin’ny nanaovan’Andriamanitra ny vatana, dia izay kely voninahitra kokoa no nalahany homena voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin’ny vatana, fa mba hifanasoa avokoa ny rantsam-batana rehetra. Koa raha mijaly ny rantsam-batana iray, dia miara-mijaly avokoa ny rantsam-batana rehetra; fa raha mahazo voninahitra kosa ny rantsam-batana iray, dia miara-mifaly ny rantsam-batana rehetra]. Ianareo no vatan’i Kristy, ka samy rantsam-batany manaraka ny laharany tsirairay avy.
Ao amin’ny Eglizy dia izao no nandaharan’Andriamanitra ny sasany: voalohany Apôstôly, faharoa mpaminany; fahatelo mpampianatra; manaraka izany dia ireo nahazo fanomezana hanao fahagagana, hanasitrana ny marary, hanampy, hitondra, hiteny fiteny samihafa tsy fantatra, handika teny. Moa Apôstôly izy rehetra? Moa mpaminany izy rehetra? Moa mpampianatra izy rehetra? Moa manao fahagagana izy rehetra? Moa nahazo fanomezana hanasitrana izy rehetra? Moa miteny fiteny samihafa tsy fantatra izy rehetra? Moa mandika teny izy rehetra?
Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Lioka (Lk. 1, 1-4; 4, 14-21 )
Tanteraka androany izany Soratra izany.
Continuer la lecture Alahady 24/01/2016 : Tenin’Andriamanitra
Alahady 27/12/2015 : Toriteny
“Fianankaviana mifankatia, lanitra ety an-tany »
Ny Evanjely dia milaza ny tantanran’iJesoa very tao an-tempoly, ny vakiteny naroson’ny fiangonana dia mikasika an’I Samoela. Raha hiverenantsika ny tantaran’I Anna dia vehivavy momba ts afaka niteraka, manambara I elie fa tsy niteraka izy mivady, izany olona tsy miteraka izany raha ho an’ny vahoaka israely dia zavatra mahamenantra. Ny nataon’I anna isa-maraina dia mandeha mankany an-tempoly mivavaka, mitalaho amin-dranomaso. I elie mpisorona izay mipetraka ao an-tempoly dia mandinika nhy fihetsik’ity vehivavy ary vaky vava nanao hoe : “ mandram-pahovian no hmpisava ny divainao? Fa hoy I anna, “ tsy sanatria mopisotro divay ny mpanomponao fa olona malahelo am-po noho ny tsy nananana anaka”.
Noho izy nangataka tamin-dranomaso isan’andro. Noeken’andriamanitra ny vavaka nataony noho ny farany ary tera-dahy izy, eri-taona taorian’izay, ary nataony hoe Samoela ny anarany, izay midika oe:” nangatahina tamin’Andriamanitra”.ary nony efa feno taona I Samoela dia natolotri Anna reninyho an’Andriamanitra indray ka nateriny tany an-tempoly.to tao amin’I Elie, ny antony dia satria nangatahiny tamin’Andriamanitra I Samoela dia naveriny aminy indray tany an-tempoly. Afaka fotoana vitsy tao an-tempoly dia nisy feo niantso I Samoela nanao hoe : “ Samoela, Samoela, namely I Samoela, inty aho tompoko fa miantso ahy ianao”. Fa hoy I Elie: miverena mandry fa tsy miantso anao aho. Niverina ihany anefa ilay feo, ary noho ny farany dia gaga I Elie, tena misy miantso ity zaza ity, ary hoy izy, andriamanitra no miantso ny zaza, raha mbola miy feo miantso anao dia valio hoe : “ Mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao”.
Continuer la lecture Alahady 27/12/2015 : Toriteny
Continuer la lecture Alahady 27/12/2015 : Tenin’Andriamanitra
« Zaza teraka tao anaty alim-be no fahazavan’izao tontolo izao »
Averina kely ny nambara tamin’ny Sasakalina momba ny nahatonga ny fankalazana ny fetin’ny Noely. Noharian’Andriamanitra ho amin’ny hasambarana ny olombelona. Napetrany tao amin’ny saha feno fiadanana. Tsy nionona tamin’izany anefa ny olombelona fa te-hitady hasambarana hafa ivelan’Andriamanitra ka latsaka tao anatin’ny fahotana dia ny fihinan’ireo ray aman-dreny ny voankazo voarara. Teo no nanomboka ny fahafatesana. Teo no nidiran’ny fahotana tamin’izao tontolo izao. Fa ny mahagaga dia vantany vao nanota ny olombelona ka noroahin’Andriamanitra tsy ho ao amin’ny saha Edena intsony dia efa nanomana lalana hamonjena ny taranak’olombelona lavon’ny fahotana sahady Andriamanitra ka ny ho tonga olombelona no lalana nofidin’Andriamanitra hamonjena antsika.
Araka ny tantara tamin’ny Sasakalina dia nivoaka ny didy: tsy maintsy soratana any an-tanindrazany ny olona tsirairay avy amin’ny fanisam-bahoaka. Rehefa tonga tany Betlehema tananan’I Davida anefa dia tonga ny fotoana hiterahan’I Maria. Tsy nisy toerana intsony ny tranom-bahiny ka tranon’omby no natoron’ny olona azy ireo ka tany no teraka Ilay Mpanjakan’izao tontolo izao. Raha miteny isika hoe tranon’omby anefa dia tsy ny omby ihany no mitoetra ao fa na ny akoho amam-borona na ny fitaovana isan-karazany toy ny angady, sns… dia ao avokoa no apetraka. Nolazaintsika tamin’ny Sasakalina ihany koa fa indraindray ataontsika toy ny fitaovana Andriamanitra, rehefa voadona isika vao mitady Azy. Fitaovana satria rehefa misy zavatra ilaintsika ihany isika vao mitodika amin’Andriamanitra. (suite…)
Continuer la lecture Lamesa noely 25/12/2015 : Toriteny